08/22/12 ~ Myanmar Forward
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အီရတ်နှင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများ ခိုင်မာလာစေရေး မျှော်လင့်သည်ဟုဆို
Posted by drmyochit Wednesday, August 22, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ အီရတ်မှ ဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက် ၈ လအကြာတွင် အီရတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန် နှင့်စစ်ရေး ဆိုင်ရာဆက်ဆံ မှုများတိုးမြှင့်ရန် အသင့်ရှိနေသည့် အရိပ်လက္ခဏာ ပြသခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်များ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မာတင်ဒမ်ဆေးက အီရတ်နိုင်ငံ သို့အလည်အပတ် ခရီးမသွားရောက်မီ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Newsnow သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒမ်ဆေးသည် အာဖဂန်နစ္စတန် တွင်ဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ပြီးနောက် ယခုရက် သတ္တပတ်အတွင်း အီရတ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ခရီးသွား ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်း၏အလည်အပတ် ခရီးစဉ်သည် အီရတ်မှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် အီရတ်သို့ အလည်အပတ် ခရီးသွားရောက်မည့် အမေရိကန် စစ်ဘက်အဆင့်မြင့် ဆုံးအရာရှိကြီး တစ်ဦး၏ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံသည် အီရတ်နိုင်ငံတွင် ၄င်း၏သြဇာ လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အီရတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် အမေရိကန် စစ်ဘက်နှင့် ဆက်ဆံရေးများ တိုးမြှင့်ရန် လိုလားခဲ့ကြောင်း၊ အီရတ်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးနှင့် စစ်ဘက်အကြီးအကဲတို့သည် အမေရိကန် စစ်ဘက်နှင့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၊ အီရတ်စစ်ဘက် အရာရှိများအား လေ့ကျင့်ပေးရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တို့ကိုလေ့လာ ခဲ့ကြကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒမ်ဆေးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒမ်ဆေး၏ အဆိုပါ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်သည် အီရန်နိုင်ငံက ဆီးရီးယား အစိုးရအား အီရတ်မှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက် ဘဏ်စာရင်းမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင်သတင်းထွက် ပေါ်နေစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်ဆေးက အဆိုပါသတင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်မှတ် ချက်ပြုပြောကြား ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း အီရန်နိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိ လာမည်ကိုစိုးရိမ် ပူပန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားရှိ ၄င်း၏မဟာမိတ် အစိုးရပြုတ်ကျခဲ့ပါက အီရတ်တွင် ၄င်း၏သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုခိုင်မာစေ ရန်ကြိုးပမ်း လာနိုင်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒမ်ဆေးက ကြိုတင်ခန့်မှန်း ပြောကြားခဲ့သည် ဟုသိရှိရပါသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံဘက် မှပစ်ခတ်လိုက် သောဒုံးပျံများ ၄င်း၏ပိုင်နက် အတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ခြင်း
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ ပစ်ခတ်လိုက် သောဒုံးပျံ ၄ စင်းသည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းနယ်စပ် မြို့ဖြစ်သော Al Turra မြို့ရှိဒေသခံများ နေထိုင်ရာ နယ်မြေအတွင်း သို့ကျရောက်ခဲ့မှုကြောင့် ကလေးတစ်ဦး အပါအဝင်များအပြား ဒဏ်ရာရ ရှိခဲ့ကြောင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နှောင်းပိုင်းတွင် စွပ်စွဲပြော ကြားခဲ့သည်ဟု Newsnow သတင်းတစ်ရပ် အရသိရှိရ ပါသည်။ ဆီးရီးယားအစိုးရသည် အဆိုပါ ဒုံးပျံများကျရောက် ခဲ့ပြီးနောက် ၄င်းဖြစ်စဉ်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားရန် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆီးရီးယား သံအမတ်ကြီး Bahjat Suleiman အားဆင့် ခေါ်ခဲ့ကြောင်း ဂျော်ဒန်အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Samih Maaytah ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဒုံးပျံများသည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင်းရှိ လွတ်လပ်သော ဆီးရီးယားတပ်မတော် (FSA) သူပုန်အဖွဲ့များ ကိုပစ်ခတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွား သည်ဟုယူဆရသော ဆီးရီးယား ဒုတိယသမ္မတ Farouk al-Sharaa စီးနင်းလာသည့် ယာဉ်တန်းတစ်ခုအား ပစ်မှတ်ထား ပစ်ခတ်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရှိရသေးဟု ဆိုပါသည်။ ဂျော်ဒန်အစိုးရသည် ၄င်း၏ပိုင်နက် အတွင်းသို့ ဒုံးပျံများ ကျရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် သောစာတစ်စောင်အား ဆီးရီးယားသံအမတ် Suleiman လက်ထဲသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုးထပ် မံမဖြစ်ပွားစေရန် ဆီးရီးယား အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းလူ တစ်ဦးဖြစ်သူ al-Sharaa သည် သမ္မတအာဆက် အစိုးရနှင့် လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပြီး ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခိုလှုံ သွားခဲ့ကြောင်း FSA ကလွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်၌ ကြေညာချက် တစ်စောင်ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် al-Sharaa အနေဖြင့် ဂျော်ဒန် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးသွား သည်ဆိုသော အတိုက်အခံ တို့၏ကြေညာချက်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း al-Sharaa ရုံးက သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ငြင်းဆို ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် တူရကီနိုင်ငံသို့ လျှို့ဝှက်စွာသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်း
အစ္စရေးပါလီမန် အမတ်များနှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အသင်းဝင်များသည် ပျက်ပြားနေသော နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ရင်ကြား စေ့ရေးကြိုးပမ်း သည့်အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က တူရကီနိုင်ငံသို့ လျှို့ဝှက်စွာ သွားရောက်လည် ပတ်ခဲ့ကြောင်း Yedhioth Ahronot နေ့စဉ်သတင်းစာက သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖြော်ပခဲ့ ကြောင်းသိရှိ ပါသည။် တူရကီဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းက ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ရေးအသင်းဝင်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဒုတိယဝန်ကြီး Yithzak Cohen ၊ ပါလီမန်အမတ် Nissim Ze'ev နှင့် ဥရောပဒေသမှ ပါမောက္ခများ နှင့်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အစ္စရေး-တူရကီ ဆက်ဆံရေးသည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာဒေသကို သွားရောက်သည့် တူရကီနိုင်ငံသား အစ္စရေးဆန့်ကျင်ရေးသမားများ ကိုသယ်ဆောင်လာသော Mavi Marmara သင်္ဘော ဦးဆောင်သည့် ရေယာဉ်စုကို အစ္စရေးစစ်သည်များ ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ တူရကီနိုင်ငံသား ၉ ဦးသေဆုံး သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပျက်ပြားခဲ့ပါသည်။ အစ္စရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တူရကီ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပါလီမန်အမတ်များ နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန် ဆက်ဆံမှု ပြန်လည်စတင် ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံက Marmara ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းပန်မှု မပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြား ထားသော်လည်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့သော တူရကီ နိုင်ငံသားများ ၏မိသားစုများကို ဝမ်းနည်းစကား ပြောကြားရန်နှင့် လျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ရန်ဆန္ဒရှိ နေကြောင်း အဆိုပါသတင်းစာ ကဖော်ပြခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် Diaoyu ကျွန်းစုများအနီးတွင် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်သွားမည်ဟုဆို
ဒေသတွင်း၌ တင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေစဉ် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် စစ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အနောက်ပစိဖိတ် ဒေသတွင်သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်နေ့စဉ်သတင်းစာ Sankei Shimbun ကဖော်ပြခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ်ရပ် အရသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းအား စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့အထိပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး မြေပြင်တပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ဝဦးနှင့် အိုကီနာဝါ အခြေစိုက် အမေရိကန် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်လေ့ကျင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမရိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကီလိုမီတာ ၂ဝဝဝ(၁၂၅ဝ မိုင်) ကွာဝေးသော မြောက်ပိုင်း Marianas ကမ်းလွန်ရှိ Tinian ကျွန်းစုသို့ အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘော တစ်စီးဖြင့်ထွက်ခွာ ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အဆိုပါ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ရဟတ်ယာဉ်များ နှင့်သင်္ဘောများကို အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါ လေ့ကျင့်ရေးနယ်မြေရှိ တရုတ်သင်္ဘောများ ကိုစောင့်ကြည့် ရန်အတွက် မောင်းသူမဲ့ ကင်းထောက် လေယာဉ်များ အသုံးပြုသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အပတ်စဉ်ထုတ် Nikkei စာစောင်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ ကျွန်းစုများသည် တရုတ်နိုင်ငံ မင်မင်းဆက် လက်ထက် ကတည်းက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် တရုတ် နိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ်မြေ များဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၁၈၉၄ ခုနှစ်မှ ၁၈၉၅ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တရုတ်-ဂျပန်စစ်ပွဲအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံက သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ပြီးဆုံးသည့် အချိန်အထိ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ကျွန်းစုများအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊၁၉၅၁ ခုနှစ်က ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ သည့်သဘော တူညီချက်အရ Ryukyu ဇုန်အား အမေရိကန်နိုင်ငံက ထိန်းချုပ်ရန်ခွဲဝေ သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ သဘောတူညီချက် အားတရုတ်အစိုးရက မည်သည့်အခါမျှ လက်သင့်ခံမည် မဟုတ်ဟု ထုတ်ပြန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိသံရုံးအား ယာယီပိတ်သိမ်း ခဲ့သည်ဟုဆို
မလေးရှားအစိုးရက ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်နေစဉ်အတွင်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ သံရုံးအား ယာယီပိတ်သိမ်း ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အနီဖာအာမန်က သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် ငြင်းဆိုနေသည့် မလေးရှားကျောင်းသား ၈ဦးရှိနေဆဲ ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါမလေးရှား သံရုံးအား လုံးဝပိတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း အနီဖာက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ မလေးရှားသံရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မလေးရှားကျောင်းသား ၁၃ဝ ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါကျောင်းသား အများစုကို မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားများ အားလုံးကို နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ပြီးပါက မလေးရှား အစိုးရအနေဖြင့် သံရုံးအားပိတ်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိအချိန်တွင် ၄င်းတို့အနေဖြင့် သံရုံးအား မပိတ်နိုင်သေးကြောင်းနှင့် သံရုံးတာဝန်ရှိ သူများအနေဖြင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မလေးရှား နိုင်ငံသားများအား စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း အနီဖာက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, August 22, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
အပစ်အခတ်ရပ်ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းရဲ့ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းတခုကို အစိုးရတပ်ဖက်က ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထပ်မံရုပ်သိမ်းခိုင်းနေတဲ့အပေါ် လက်မခံရာက စစ်ရေးအရ တင်းမာမှုတွေ ပေါ်ပေါက် နေပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား နောက်ထပ် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း တပ် ဖွဲ့တွေဟာလည်း ၀တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးကိစ္စ အချေအတင် ဖြစ်စရာတွေ ကြုံနေရတာပါ။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းက စစ်ရိပ်စစ်ယောင်သန်းနေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုတော့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ထိုင်းအ ခြေစိုက်သတင်းထောက်ကိုမိုးဇော်ကတင်ပြထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းခေါ် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSAဟာ ဒီနှစ် ဇန်န၀ါရီလက အပစ် အခတ်ရပ်စဲခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ အစိုးရတပ်က မိုင်းရှုးမြို့နယ်အတွင်းက SSA မြောက်ပိုင်းရဲ့ စခန်းတခုကိုရုတ်သိမ်းခိုင်းတာကြောင့် နှစ်ဖက်အကြား စစ်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ နှစ်ဘက်တပ်တွေအကြား တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေကို ရှမ်းပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း ၀မ်ဟိုင်းဒေသမှာ အခြေပြုတဲ့ SSAရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှုးစိုင်းလကအခုလိုပြောပါတယ်။
“မိုင်းရူးမြို့နယ် ကျနော်တို့ ဟိုးအရင်ကတည်းက နေထားတဲ့ တာ့ဆန်ပူး ကုတို့ဆိပ်မှာပေါ့ အဲ့ဒီ့မှာ မိုင်းရှုးတပ်ကနေ ဖယ်ခိုင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးရက်လောက်ကပေါ့။ ကျနော်ကတော့ မရုပ်ပေး နိုင်တော့ဘူးလေ။ အခုတော့ သူတို့ တပ်လည်း ရှေ့မတိုးလာသေးဘူးလေ။ နည်းနည်းတော့ အလှမ်းဝေး နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း တပ်ရင်းနှစ်ရင်းနဲ့ လာတယ်။ သူတို့ရှေ့တိုးလာရင်တော့ အတင်းဖယ်ခိုင်းရင်တော့ အခြေအနေတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။”ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်းကလည်း SSA မြောက်ပိုင်းနဲ့ အစိုးရတပ်တွေအကြားမှာတိုက်ပွဲ အပြင်းအထန် ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အစိုးရတပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း SSA မြောက်ပိုင်းကတပ်စခန်း ၂ခု ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ ရပါတယ်။ SSA မြောက်ပိုင်း နဲ့ အစိုးရအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်မှာ တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ် ၂၀ကျော်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပေမဲ့ အခြေအနေတွေက တိုးတက်မလာဘူးလို့SSAမြောက်ပိုင်းဘက်ကသုံးသပ်တာလည်းရှိနေပါတယ်။
“ကျနော်တို့က အစိုးရနဲ့ လက်မှတ်ထိုးတာက တပိုင်းပေါ့နော်။ သူတို့ စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ လုပ်တာက တခြားစီဖြစ်နေတယ်။ မကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်။ ဆိုလိုတာက နည်းနည်းပါးပါး ငြိမ်သွားတာကလွဲပြီးတော့ ဘာမှ သိပ်ထူးခြားမလာဘူးပေါ့။ တပ်တွေ ဆက်ဆံရေးကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တဘက်နဲ့တဘက် အယုံအကြည်လည်းမရှိကြသေးဘူးပေါ့။”
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်မှာ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အနီးက အစိုးရတပ်တွေကို ၅ရက်အတွင်း ရုတ်သိမ်းဖို့ ပါရှိပေမဲ့ အခုချိန်ထိရုတ်သိမ်းတာမရှိကြောင်းလည်း သူကဆက်ပြောပါတယ်။SSA မြောက်ပိုင်းဖက်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ ဆက်လက်ပြီး တွေ့ဆုံသွား မှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှုးစိုင်းလကပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားလို့ စစ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးတာ။ အဲ့တာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ နောက်တဆင့်တက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်း သူတို့အပေါ်ပဲ မူတည်တာပေါ့။ သူတို့ ကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့လည်းနှစ်ဘက်ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။”
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းလို့ လူသိများတဲ့ ရှမ်းပြည်ြ ပန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးခဲ့ပြီး အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ် ၃၀လောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအ နေပေါ်မှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဌကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွတ်ဆစ်က နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဆီကိုစာရေးသားခဲ့ပေမဲ့ အကြောင်းပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင် ပိုင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှုးစိုင်းလောင်ဝ်ဆိုင်းကပြောပါတယ်။
“စာထဲမှာလေ ကျနော်တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ပြဿနာ တွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေကို ပြန်လည်ပြီးတော့ သုံးသပ်ပေးစေလိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ကျနော်တို့ ဥက္ကဌကြီး ကနေ တောင်းဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်။ ပါပါတယ်ခင်ဗျ။အခုထက်ထိတော့ဘာမှမပြန်ဘူး။”
တချိန်တည်းမှာတော့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းနဲ့ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီခေါ် ၀တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးကိစ္စတွေမှာ မပြေလည်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းက ရှမ်းပြည် နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ကိုဝတပ်ဘက်က ဖမ်းဆီးခဲ့ တာဖြစ် တယ်လို့ ဗိုလ်မှုးစိုင်းလောင်ဝ်ဆိုင်းကပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အသက်မွေးကြောင်း အလုပ်အကိုင်တွေရှိဖို့အတွက် တောင်ယာ တွေ စိုက်ခင်းတွေကို ကျနော်တို့က ဖန်တီးပေးရမယ့်အချိန်မှာ သူတို့က သူတို့နယ်မြေကို ကျူးကျော် တယ်ဆိုပြီးတော့ စစ်ရေးနဲ့ ဖိအားပေးလာတာပါ။ သူတို့ဖမ်းထားတာကတော့ ၁၄ယောက်ရှိပါတယ်။ သေနက် လည်း ၁၄လက်ပါ။ မိုင်းတုံနယ်မြေထဲမှာ လူပ်ရှားနိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကို ၀ိုင်းဖမ်းတာပါ။”လောလောဆယ်မှာတော့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်မလွှတ်သေးပါဘူး။ အဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေ ပြန်လွှတ်ဖို့ကိုတော့ ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုဥက္ကဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ နယ်မြေမသတ်မှတ်ရသေးတာနဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ မဖွင့်ရသေး တာကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တဆင့်ပြီးတဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီးရင်တော့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မနေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှာပြောဆိုထား ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု-သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ကတော့ အပစ်ရပ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဟာ အခန့်မသင့်ရင် အချိန်မရွေး ပျက်ဆီးသွားနိုင်ကြောင်း ဒီလ ၁၂ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
SSPP ၏ စစ်ရေး ပဋ္ဋိပက္ခ အခြေအနေ မှန်ကို လွှတ်တော်သို့ ဦးအောင်မင်း တလွှဲတင်ပြ SSPP ၏ စစ်ရေး ပဋ္ဋိပက္ခ အခြေအနေ မှန်ကို လွှတ်တော်သို့ ဦးအောင်မင်း တလွှဲတင်ပြ SSPP ၏ စစ်ရေး ပဋ္ဋိပက္ခ အခြေအနေ မှန်ကို လွှတ်တော်သို့ ဦးအောင်မင်း တလွှဲတင်ပြ
“ကျနော်တို့ SSPPက ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇန္နာဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ ပြီးတော့ လား ရှိုးမြို့မှာရော တောင်ကြီးမြို့ ပေါ်မှာပါ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ရှိတယ်။ တပ်နေရာကိုတော့ သူ့နေရာသူနေ၊ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေ ဆိုပြီး၊ ယေဘူယျ သတ်မှတ်ကြတဲ့ အပြင် အစိုးရက ဆုတ်ပေးရမဲ့နေရာ ရှိသလို ကျနော်တို့ ဆုတ်ပေးရမဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိ ပါတယ်။ ဒါကို သဘော တူညီချက်အရ ကျနော်တို့ ဆုတ်ပေးပေမဲ့ အစိုးရဖက်ကတော့ မဆုတ်ပေးတဲ့ အပြင်၊ ရာဇသံ (၃) ခါပေး ပြီး ထပ်ဆုတ်ခိုင်းခဲ့သေးတယ်။ ဒါလည်း နှစ်ကြိမ်တိုင် ကျနော်တို့ ဆုတ်ပေးပါရက်နဲ့ ထပ်မံ ရာဇသံပေးပြီး ဆုတ်ခိုင်းပြန်တယ် ”ဟု ဆိုပါသည်။
SSPP ၏ လာရှိုး ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်မှူးစိုင်းအောင်လ ဦးဆောင်ပြီး၊ တောင်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံးတွင် ဗိုလ်မှုး ဆေးဖိန်ဖက ဦးဆောင်နေပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆက်ဆံရေး ရုံးများ ရှိနေပါလျှက်နှင့် တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်နေသည်မှာ တမင် သာလျှင် ဖန်တီးနေသည်ဟု သုံးသပ်သူများကဆိုပါသည်။
SSPP နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်နေရသလဲဆိုသည့် လွှတ်တော် အမတ်တဦး၏ အ မေးကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကော်မီတီ ဒုဥက္ကဌ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက အထက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။
SSPP ကမူ အစိုးရသည် တပ်နေရာ ချထားခြင်းကို အကြောင်းပြပါက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းလို့ရပါလျှက် အ စိုးရဖက်က အကြောင်း မကြားဘဲ ဘာကြောင့် SSPP တပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သနည်း။ အပစ်ရပ်ချိန်မှစပြီး တိုက်ပွဲ အကြိမ် (၃၀)ထက်မနဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီး၊ ဖြေရှင်းပေးပါရန် လာရှိုး တောင်ကြီး ဆက်ဆံရေးများမှ တဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု အဖွဲ့ နှင့် သမ္မတထံ တိုင်ကြားခဲ့ ပါသည်။ သို့သော် ပြေလည်မှု မရသည့်အပြင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါသည်။
SSPP သည် ဦးအောင်မင်းပြောသလို၊ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဆက်ဆံရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ရေး၊ နှစ်ဖက် ထိမ်းချုပ်ရာ နယ်မြေ၌ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီး သွားလာပါက ကြိုတင်အကြောင်းကြားရေး အပါဝင် အချက်(၅)ချက်ကို သဘောတူခဲ့ပါသည်။
“ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြသနာတွေ ရှိပါစေတော့၊ တကယ်လို့ ဦးအောင်မင်းတို့ဖက်က လိုလားရင်၊ ဆွေးနွေးပွဲအသစ်ပြန်လုပ်ပြီး၊ သဘော တူညီချက်အသစ်တွေ ပြန်ညှိလို့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာပြန်ဆွေးနွေးပေါ့။ အခုဖြစ်နေတာက ရာဇသံပေးတယ် ဆုတ်ခိုင်းတယ်၊ဒါ ကို သမ္မတထံ တိုင်ကြားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မဖြစ်လာတဲ့အပြင် တင်းမာမှုတွေဘဲများလာတယ်၊ ဒီတော့ ကျနော်တို့က အစိုး ရရဲ့ တတိယ အကြိမ် ရာဇသံကိုတော့ လိုက်နာတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး”ဟု ဆိုပါသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံ တော်၏ ဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေပါမည်ဟု ကတိသစ္စာ ပြုထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ကတိသစ္စာ ပြုထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ပေးထားသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်ရပ်တည် သွားမည်”လို့ အတိအလင်း ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော် ကော်မတီတွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဆောင်အယောင်တွေ ပေး အပ်ရမယ်၊ ဘဏ္ဍာငွေတွေ ကုန်ကျမှုများမယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ပါဝင်သလို သမ္မတ ရဲ့ လွှတ်တော်ဆီ ပေးတဲ့ စာထဲမှာလည်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်“ကျနော်တို့က လစာတိုးရဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအကြား အပြန် အလှန် ထိန်းကျောင်းဖို့ အတွက်ပါ”လို့ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် က ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကော်မတီတွေနဲ့ ကော်မရှင်တွေကို ပြည်ထောင်အဆင့် သတ်မှတ်ရေးကိစ္စဟာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးရဲ့ သဘောထားဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ရဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက် က ဘီဘီစီ ကို ဖြေဆိုသွားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးရမယ်၊ ဒါကြောင့် စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသာ လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်သွားမယ် လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆိုရင် ၀န်ကြီးတွေလို တိုက်တွေ၊ ကားတွေ လိုချင်တယ်လို့ပဲ တချို့အဖွဲ့တွေက ထင်နေကြတယ် လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်ဟာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့တို့နဲ့ တတန်းတည်း ရှိဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အကြောင်း၊ လက်ရှိအ ချိန်မှာ လွှတ်တော်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပေါ်မှာ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေ လျော့ လာတာတွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်းလည်း ဦးအေးမောက် က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ခုံရုံးအဖွဲ့ကြောင့် လွှတ်တော် ရဲ့ ဥပဒေတွေ လွတ်လပ်စွာ ရေးဆွဲ ပြဌာန်း အတည်ပြုရာမှာလည်းပဲ အချိန်ကြန့်ကြာမှု အစရှိတဲ့ အဟန့်အတားတွေ ရှိကြောင်း၊ ဒီအဟန့်အတားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရှိကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဥပဒေကြမ်း ရေးရာ ကော်မတီဝင် ဦးဘရှိန် ကလည်း ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး ဥပဒေတွေကိုလည်း ခုံရုံးက စိစစ်မှု ကြာမြင့်ခြင်းကြောင့် တချို့ဥပဒေတွေဟာ ပြည်သူတွေ အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်တွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။
အလားတူ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ကော်မတီကို တိုင်ကြားထားကြတဲ့ ကျေးလက် ဒေသတွေက လယ်သိမ်း၊ ယာသိမ်း ကိစ္စတွေကို ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေ သွားရောက် စစ်ဆေးဖို့ ရှိပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း မရတာတွေကြောင့် အလုပ် ဆက် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်း ဆိုကြတယ်။
“တခုခု စစ်ဆေးဖို့ ဆိုရင် အချက်အလက်တွေ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒီ အချက်အလက်တွေကိုလည်းပဲ ကျနော်တို့က ပြည်ထောင်စု အဆင့်ဖြစ်မှ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဆီက တောင်းပိုင်ခွင့် ရှိတာဗျ”လို့ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် က ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် တို့မှာ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် တွေ ၃၀ ကျော်စီရှိကြပါတယ်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ပေါင်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာလည်း ကော်မရှင်တချို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် အားလုံးကို ပြည်ထောင် စု အဆင့် မဖြစ် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရတယ်။
ပြည်ထောင်စု အဆင့်သတ်မှတ်ရေး အငြင်းပွားမှု ကိစ္စမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် တွေ အပြင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်တဲ့ သူတွေ ပါဝင်တဲ့ ကော်မတီနဲ့ ကော်မရှင်တွေကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် သတ်မှတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှု တွေလည်း ပါပါတယ်။
လွှတ်တော် ပြင်ပမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူး ကိစ္စရပ်များ လေ့လာ စစ်ဆေးရေး ကော် မရှင် အဖွဲ့ထဲမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့သား ဦးတိုးနိုင်မန်း ပါဝင်တာကြောင့် အခုအငြင်းပွားမှုဟာ ဦးရွှေမန်း ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရည်မှန်းချက်နဲ့လည်း ပတ်သက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရဲ့ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကိစ္စကို ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးရဲ့ မဲအရေအတွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံထောက် ခံ မှု နဲ့ဆောင်ရွက် နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရဲ့ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မှု ကိစ္စပြီးတဲ့အခါ ပြည်သူ့လွှတ်တော် က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံရုံး အဖွဲ့ကို ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
စစ်ဆေးချက်အရ ခုံရုံးအဖွဲ့က ဥပဒေတခုခု ချိုးဖောက်တာ တွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဥပဒေအရ အဖွဲ့ဝင်တွေ အရေးယူ နုတ်ထွက် ခိုင်းခံထိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတွေက အခု အရှုပ်တော်ပုံဟာ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ ဦးရွှေမန်း ဦးစီးတဲ့ လွှတ်တော်ကြား အားပြိုင်တဲ့ ပွဲလို့ ခပ်ရှင်းရှင်း မြင်ကြပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်ရေးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မတော်က ဆန္ဒရှိမှသာ လွှတ်တော်သည်လည်း တည်မြဲမယ်၊ ဒီတော့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ခင်မင်အောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်သိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ တပ်မတော်က ပေးသလောက်ပဲ ရမှာပါ၊ တပ်မတော် အလိုရှိသလောက်ပဲ ကျမတို့ လွှတ်တော် သက်တမ်း က ရှိမှာပါ”လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတာကိုကြည့်ရတာ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရကြား အားပြိုင်မှုကြောင့် ပွင့်လင်းစနိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍ ပြန်ခေါင်းထောင်လာမှာကို သတိပေးတာလို့ပဲ ကောက်ချက်ဆွဲရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပါ။
မြန်မာပြည်သူ များအတွက် အထူးဝမ်းသာ စရာလား?
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအား ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ လေးခု အားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေး သွားမည်ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မှ သိရသည်။
ယင်းသို့ ကော်ပိုရေးရှင်းပြောင်း လဲဖွဲ့စည်းရာတွင် နိုင်ငံတော် ဘတ် ဂျက်ငွေများကို မှီခိုအသုံးပြုသွား မည်မဟုတ်ဘဲ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရန်ပုံငွေနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း များထံမှ ချေးငွေနှင့် နည်းပညာ အ ထောက် အပံ့များဖြင့်သာလည်ပတ် သွားမည်ဟုသိရသည်။ ထိုကော် ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတော့ မကြာ မီဆောင် ရွက်တော့မည်ဖြစ်ပြီး အချိန် အတိအကျကိုတော့ ဆက်သွယ် ရေးထံမှ မသိရှိရပေ။
”လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပေမယ့် ဆက် သွယ်ရေး၊ စာတိုက်၊ ကြေးနန်းဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်မှာပဲရှိနေမှာပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအနေ နဲ့ကတော့ ကုမ္ပဏီတွေကို အမြဲတမ်း ဥပဒေအရစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ လုပ်ကိုင် မှာပါ” ဟု ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးကျော်စိုး က ပြောသည်။ ယင်းသို့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ အား လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပေးပါက ပြည်သူများ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု အသစ် တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပေးဝယ်ရသည့်တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည့် ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာမည်ဟု ၄င်း ကဆက်ပြောသည်။
”ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ရွေး စရာမရှိတဲ့ အနေအထားကနေ အပြိုင် ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာမယ့် ရွေးချယ်စရာရှိလာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ရစေလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက် လက်ပြောသည်။ယင်းသို့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ် ငန်းအား ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ်ပြု ပြင်ပြောင်းလဲ လာခြင်းကြောင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက် လာမည်ဖြစ်သလို စိန်ခေါ်မှုလည်း ဝင်လာနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအပြင်ဖုန်း သုံးစွဲမှုအပိုင်းမှာလည်း တိုးတက်လာ မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆက်ပြော သည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကော်မရှင်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အ စည်းများ၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး အကြံ ပေးကောင်စီတို့နှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း တိုင်ပင်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံတကာတင်ဒါစနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူ ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးမှသိရသည်။
သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်က လူအင်အား ၅၀ ခန့်ပါဝင်သော လူတစုက ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရန်တိုမြို့၊ CBC (Canadian Broadcasting Commission) သတင်းဌာနရှေ့တွင် ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မြို့ခံရဲများ၏ တား ဆီးမှုကြောင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်သာ စာရွက်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်များထောင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီး CITY တီဗီ အသံ လွင့်ငှာနဘက်သို့ ချီတက်သွားကြသည်။ ထို့နောက် တိုရန်တို မြို့တော်ခန်းမအရှေ့မှဖြတ်ကာ မြို့လယ်နေရာ Dundas Square တွင် ဆက်လက် ဆန္ဒပြကြသည်ဟု သိရှိရသည်။ ထိုသို့ ဆန္ဒပြရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားများမှ မူဆလင် အပြစ် မဲ့ပြည်သူများအား မတရား အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်နေသည်ဟု ကြွေးကြော်မှုများ ကြားတွေ့ရကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြော သည်။ယခုဆန္ဒပြပွဲကို ဖေ့ဘွတ်ပိုင်ရှင် Aliyah Khan က စတင်စည်းရုံးလှုံဆော်ခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က တကြိမ်ဆန္ဒပြမှု လုပ်ခဲ့သေးသော်လည်း မည်သည့်မီဒီယာမှ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ယခုတကြိမ် CBC သတင်းငှာနရှေ့တွင် ထပ်မံပြုလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခု ဆန္ဒပြမှုမတိုင်ခင် အွန်တေရီယိုပြည်နယ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းကြီးမှ နေ၍ ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက် တစောင်ကိုလဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် မြန်မာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာအသင်းကြီးနှင့်တကွ မြန်မာကွန်မြူနတီများမှနေ၍မည်သည့်လူမျိုး မည်သည့်ဘာသာဝင်တို့၏ အကြမ်းဖက်မှုများကို မဆို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည။်
ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့ဘာသာဆိုတဲ့အစ္စလာဘာသာဝင်များက အိန္ဒိယမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ဖျက်စီးနေကြပုံ
Posted by drmyochit Wednesday, August 22, 2012, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အာသံပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ အတ်တာပရာဒက်ရှ် ပြည်နယ် မြို့တော် Lucknow မှာ မနေ့ကမူဆလင် ဘာသာဝင်တွေက ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။Lucknow မြို့ ဗလီတစ်ခုကနေ သောကြာနေ့ ၀တ်ပြုအပြီး ထွက်လာကြတဲ့ လူ (၅၀)
လောက်ပါဝင်တဲ့ လူအုပ်ဟာ ဗုဒ္ဓပန်းခြံအထိ စီတန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးပန်းခြံအရောက်မှာ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ပန်းခြံအနီးက ကားတွေ မှန်တွေကွဲပြီး ကားတချို့မီးရှို့ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပန်းခြံထဲက ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ အဆောက်အဦးတွေလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အကြမ်းဖက်သူတွေက သတင်း ထောက်တွေကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် (၂၀) လောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး
လမ်းတွေပေါ်မှာ လူတွေထောင်ချီပြီး များပြားလာတော့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲ လိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲကို အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုက ဦးဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့သူတွေဟာမိမိတို့မဟုတ်ကြောင်းဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။
အလားတူ ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ် ဆရိနဂါမြို့မှာလည်း ထင်ရှားတဲ့အစ္စလာမ်အမျိုးသမီး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အာသံပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဖိနှိပ် ခံနေရတဲ့ မူဆလင်တွေ ကက်ရ်ှမီးယားကို လာကြပါစေ သူတို့အတွက်မိမိတို့ တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်လို့ ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။
एक ही विकल्प मोदी (EK Hi Vikalp Modi)
मायावती कि मूर्ति पे हमला कर खंडित करने वालों पे बसपा आग बबूला हो गई
थी, लेकिन उसी लखनऊ में गौतम बुद्ध कि प्रतिमा पर किये हमले पर बसपा कि
चुप्पी का क्या कारण है?? याद रहें ये वोही माया कि बसपा है जो गौतम
बुद्ध के नाम पर खूब राजनैतिक रोटियां बटोरती है, अब इश चीज पर हमारे
दलित बंधुओं को सोचना चाहिए कि इश मायावती को दलितों से ज्यादा अल्प
संख्यक प्यारे हैं,,
Modi is the only option (EK Hi Vikalp Modi)
She struck the statue on BSP split on who was livid, but that the
attack on the statue of Gautama Buddha, the BSP in Lucknow, the
silence What is the reason?याद रहें ये वोही माया कि बसपा है जो गौतम
Posted by drmyochit Wednesday, August 22, 2012, under ကာတွန်းများ | No comments
ထိုင်းသို့ တရားဝင်အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု မကြာမီခွင့်ပြုမည်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားများ တရားဝင်ပို့ ဆောင်နိုင်ရန် တင် ဒါစနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော အေဂျင်စီများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို မကြာမီ ထုတ်ပေး တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အလုပ် သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပြည်တွင်း၌ ရှိသော အေဂျင်စီများအား လျှောက်ထား ခွင့်ပြုရာ လက်ရှိအေဂျင်စီ ၅၁ ဖွဲ့ လာရောက် လျှောက်ထားပြီး ဖြစ်၍ လိုင် စင်ရရှိသော ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ညှိနှိုင်း မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “လိုင်စင်ရတာနဲ့ ချက်ချင်း လုပ်လို့ မရသေးဘူး။ ဒီကအေဂျင်စီတွေကို ထိုင်းကိုခေါ်သွားပြီး အဲဒီက ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ရဦးမှာ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်သူများ အနေဖြင့် ပွဲစားများ၏ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအပြင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာ လာကာ အလုပ်သမားများအား အခမဲ့ဝန် ဆောင်မှုတို့ဖြင့် အလုပ်သမား စုဆောင်းပေး မည်ဖြစ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလုပ်ခေါ်စာ များကိုလည်း တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အစိုးရအလုပ် သမားရုံးများ၌ အလုပ်ခေါ် စာများအား ကြေညာပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။ ယခု ကဲ့သို့ ရွေးချယ်နိုင် ရန်အတွက် အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှ ပြည်ပအလုပ် အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများအား ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်မှစ၍ လျှောက်လွှာ များတင်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ပြည်ပသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများ အနေဖြင့် ယ ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံထက် ထိုင်းသို့သွားရောက်မှု ပိုများလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရန် သတိပေး
ပြည်ပဟက်ကာ အဖွဲ့များ၏ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံမခံ ရစေရေးအတွက် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန များအား အင်တာနက် ကွန်ရက် လိုင်းများအား လုံခြုံရေးစနစ် တိုးမြှင့်ထားရန်နှင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ကော်မတီမှ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား ထားကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်းတာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
”ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတိုက်ခံရပြီးက တည်းက အမျိုးသား ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကော်မတီက အစည်းအဝေး လုပ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ဒီလိုမျိုး ထပ်ပြီး မတိုက်ခံရဖို့ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရ မယ်ဆိုတာနဲ့ ပြည်ပကဘယ် အဖွဲ့အစည်းတွေ ကမြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အင်တာနက် ကွန်ရက်တွေကို ဝင် တိုက်နေတယ် ဆိုတာကို ပြောသွား တယ်။ အဲဒီနောက် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးကို အင်တာနက်ကွန်ရက် စနစ်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို စနစ်တကျ တိုးမြှင့် ထားဖို့နဲ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ကွန်ရက်တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အကြောင်းကြားစာ ပို့လာတယ်”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ ထို့အတူ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက အမျိုးသား ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ကော်မတီမှ ပေးပို့သော အကြောင်း ကြားစာအရ ဝန် ကြီးဌာန တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် အရေး ကြီးသော Data များအား ပြည်ပ ဟက်ကာများ၏ ခိုးယူဖျက်ဆီးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် Data လုံခြုံရေးကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင် ရွက်သွားရန်၊ ISP များအလိုက် တာဝန်ကျသူများက Data စီးဆင်း မှုအား ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် တိုက်ခိုက်ခံရပါက Data များဆုံး ရှုံးမှုမရှိ စေရန်ဌာန အလိုက်ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်များအား အသိ ပေးအကြောင်း ကြား၍အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရမည်ဟုပါရှိကြောင်း ပြောသည်။ ”ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကော် မတီကပို့တဲ့ အကြောင်းကြားစာ ကတော့ဝန်ကြီး ဌာနအလိုက် အင်တာ နက်ကွန်ရက် လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ဖို့ ပဲ”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ အင်တာနက် ကွန်ရက်များအား ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နေမှုများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာအိုင်တီ ပညာရှင်များနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာအိုင်တီ ပညာရှင်များအား အမျိုးသား ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးကော်မတီမှ အလွတ်သဘောဖြစ်စေ၊ တရားဝင် ဖြစ်စေပူးပေါင်း ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။
”ပြည်ပရောက် မြန်မာအိုင်တီ ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်တာဟာ သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာ နက်ကွန်ရက်တွေကို ပြည်ပက ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်နေတာကို ဝိုင်း ဝန်းတွန်းလှန် ပေးဖို့အတွက် အကူအညီ တောင်းတဲ့သဘောပါ ”ဟု သက် ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကဆိုသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပြည်ပဟက်ကာ များ၏အလွယ် တကူဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရခြင်းမှာ လုံခြုံရေးစနစ်များ ချို့တဲ့မှုကြောင့် လည်းပါဝင် ကြောင်း၊ ထိုလုံခြုံစနစ်များ ကောင်းမွန်စေရန် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနအား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစေကာ ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်အား အချိန် ပြည့်စောင့်ကြည့်စေရန် အမျိုးသားဆိုက် ဘာလုံခြုံရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ပေးအပ် ထားကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုး သားဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ကော်မတီကို ယခင် အစိုးရလက်ထက် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင် တပ်မတော် အရာရှိများ၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြင်ပမှ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင် ပညာရှင် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အီရတ်နှင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှု...
ဆီးရီးယားနိုင်ငံဘက် မှပစ်ခတ်လိုက် သောဒုံးပျံများ ၄...
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် Diaoyu ကွ...
မလေးရှားနိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိသံရုံးအား ယာယီ...
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ပရိတ်သက် ကြိုက်အောင် "ဒီမ...
ထိုင်းသို့ တရားဝင်အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု မကြာမီခွင့်ပြ...
မလေးတွင် မြန်မာ အလုပ်သမားများ ၀ိုင်းရိုက်၍ အင်ဒိုန...
KIA အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးနှင့်အတူ အတင်းအဓမ္မ စုဆောင်းခြင်...
နော်ဝေးကို ကူးစက်သွားတဲ့ ဘင်္ဂါလီမီး
ဗုဒ္ဓ ရုပ်ထု တော်အား အနမ်းချွေခဲ့သည့် ပြင်သစ်အမျိုး...
မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ ပြန်လည်ပေးရေး ကမ္ဘာ့ဘဏ် နည်...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနှင့်...
အလုပ် ဖြုတ်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် တောင်အာဖရိက ပလက်တီနမ်...
နယ်စပ်သွားရောက်သူများအား မွန်ပြည်နယ်တွင် ရှောင်တခင...
ဆီးရီးယား တိုက်ပွဲကြား နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်တွေေ...
Assange ကို လွှတ်ပေးရေး အတွက် Anonymous အဖွဲ့မှ ဗြိ...
(၄)နှစ်သမီးမေသူခိုင် ခိုးယူခံရမှုပေါ်ပေါက်ခြင်း မရှိ...
မြန်မာပြည်သား: ဇော်မတက်အုပ်စု၊ ဟင်္သာရပ်ကွက်မှ သေဆုံ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကုလသမဂ္ဂက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့် ကြေ...